Hypersexuality ရည်ညွှန်းခြင်းအားဖြင့်လူနာလက္ခဏာများ။ ဆက်တိုက်ဆက်နွယ်သောအမျိုးသားအမှုပေါင်း (၁၁၅) ခု၏အရေအတွက်ဇယားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ
115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2015): Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာလက်ခဏာ
comments: paraphilias နှင့်နာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းစသည့် hypersexuality မမှန်သည့်အမျိုးသားများ (ပျမ်းမျှအသက် ၄၁.၅) အမျိုးသားများအတွက်လေ့လာမှုတစ်ခု။ ၂၇ ယောက်ကို“ ရှောင်နိုင်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် (ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြင့်) တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်နာရီ ၇ နာရီအထက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဤအညစ်ညမ်းစွဲ၏ 71% 33% အစီရင်ခံနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (အောက်တွင်ကောက်နှုတ်ချက်) နဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုသတင်းပို့.
ကျန်ရှိနေသေးသောအမျိုးသားများ၏ ၃၈% သည်မည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသနည်း။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာနှစ်ခုမှာ ED နှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုကမဖော်ပြဘူး၊ ပြီးတော့စာရေးသူတွေကအသေးစိတ်တောင်းဆိုချက်တွေကိုလျစ်လျူရှုထားတယ်။ စံပရိုတိုကောကိုချိုးဖောက်ခြင်းတွင်ဂျိမ်းစ်ကန်တာကသူသည်အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များကိုမည်သည့်အခါမျှထုတ်ပြန်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုပညာရေးစာရင်း - ၀ န်ဆောင်မှု (SexNet) တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
link - J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။
2015 နိုဝင်ဘာ-ဒီဇင်ဘာ;41(6):563-80. doi: 10.1080/0092623X.2014.935539.
Sutton KS1, Stratton N ကို, Pytyck J ကို, Kolla NJ, Cantor JM.
Hypersexuality တစ်ခု ပို. ပို. အဖြစ်များပေမယ့်ညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်လူနာတိုင်ကြားချက်နေဆဲဖြစ်သည်။ hypersexuality များအတွက်ရည်ညွှန်းလူနာလက်တွေ့တင်ပြချက်များမှာမတူကွဲပြားမှုတွေနေသော်လည်းစာပေတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်ရပ်ဆန်းဖို့လျှောက်ထားရန်ယူဆနေကြသည်ကုသမှုချဉ်းကပ်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာက၎င်း၏လျှောက်လွှာရှိနေသော်လည်းထိရောက်မှုသက်သေပြခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလူဦးရေအချိုးအစား, စိတ်ကျန်းမာရေးဆနျးစစျဖို့အရေအတွက်နည်းလမ်းများသုံးခြင်းနှင့် hypersexuality ရည်ညွှန်း၏ဘုံလက်တွေ့ Subtype ၏ sexological Correlate ။ တွေ့ရှိချက်များ, အင်္ဂါရပ်များကွဲပြားပြွတ်နှင့်အတူအသီးအသီး Subtype ၏တည်ရှိမှုကိုထောကျပံ့။ Paraphilic hypersexuals မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနောက်ကွယ်တွင်တစ်ဦးမောင်းနှင်အားအဖြစ်ပိုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုတစ်ခုအစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှစတင်များနှင့်အသစ်အဆန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ပိုမိုနံပါတ်များကိုအစီရင်ခံထားသည်။ ရှောင်ကြဉ်ပါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစိုးရိမ်စိတ်, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း, တစ်ဦးရှောင်ရှားခြင်းနည်းဗျူဟာအဖြစ်လိင်၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နာတာရှည်သူ့မယားကိုပြစ်မှားသောအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့်အပျိုဖော်ဝင်၏နောက်ပိုင်းတွင်စတင်ခြင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Designated လူနာပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, အလုပ်အကိုင်, ဒါမှမဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများအစီရင်ခံရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ အရေအတွက်ပေမယ့်, ဒီဆောင်းပါးမည်သို့ပင်ဆိုစေနောက်ခံ typology လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် sexological အကဲဖြတ်အများစုအဓိကအင်္ဂါရပ်များအနေဖြင့်ပေါ်ထွက်လာသည့်အတွက်ဖော်ပြရန်လေ့လာမှုတွေ့ရမယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောစပျစ်သီးပြွတ် Prospect လေ့လာတဲ့အခါမှာအလားတူ typologies ပေါ်ထွက်လာသောအရာကိုအတိုင်းအတာအထိသိရှိနိုင်ရန်ရန်, လေ့လာဆန်းစစ်အဖြစ်သက်သက်သာပင်ကိုယ်မူလစာရင်းအင်းနည်းစနစ်, apply ပေလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်အောက်ကကောက်နုတ်ချက်ခုနှစ်တွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) နဲ့ပတျသကျတဲ့ကျယ်ပြန့်လှည့်ဖျား, ပြဿနာကိုညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူသုံးပုံတစ်ပုံပြီးသား, မိတ်ဖက်နှင့်အတူ ED တစ်ဘုံရှေ့ပြေးနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (DE) သတင်းပို့သော။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း ဒီစာရွက်မှာဘာပျောက်နေသလဲ။
71% သုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေးကြလူသိများ 33% နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောယောက်ျား၏ 38% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘယ်အရာကိုကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသနည်း ဒီလေ့လာမှုကမပြောပါဘူး၊ စာရေးသူအသေးစိတ်တောင်းဆိုမှုများကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်နှစ်ဦးသည်အခြားမူလတန်းရွေးချယ်မှု ED နှင့်အနိမ့်လိင်စိတ်ဖြစ်ကြသည်။
လူတို့သညျမိမိတို့အ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးလျှင်မရခဲ့ကြ ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ. သူတို့ပြုသမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု porn နှင့်မဖက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ masturbating ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့လျှင်သူတို့ porn-သွေးဆောင် ED ခဲ့သဘောပေါက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။
စာရေးသူကိုးကား Ley et ။ အယ်လ်။ , porn သွေးဆောင် ED တိမ်အဖြစ် 2014 ။ ဒါဟာမနှင့်ခဲ့ပြီ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကဒီမှာဖျက်သိမ်း.
ရှောင်ကြဉ်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအမျိုးအစား (n = 27) ကိုအခြားဖြစ်ရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါ (n = 88)၊ ဤအဖွဲ့ ၀ င်များအနေဖြင့်လိင်ကိုရှောင်ရှားခြင်းမဟာဗျူဟာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် (100% vs. %), χ 41 (2, = = 1) = 34, p = .3.81, φ = 051 ။ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုလေးစားမှုအရရှောင်လွှဲနိုင်သည့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအမျိုးအစားသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပြ(နာများ (၇၄% နှင့် ၂၃%) ၏သမိုင်းကိုဖော်ပြရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် (0.33 (74, n = 23) = 1, p <.101, φ = 20.27 နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုပြproblemsနာများ (၇၁% နှင့် ၃၁%)၊ χ (001, n = 0.45) = 71, p = .31, φ = 1, နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်လိင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြreportedနာအများဆုံးဖြစ်သည်။ 88% vs. 10.63%), χ 001 (0.35, = = 33) = 7, p = .2, φ = 1 ။ ရှောင်ကြဉ်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပုံစံတွင်ရှိသောသူများသည်အစဉ်အဆက်လေးနက်သောအချစ်ဇာတ်လမ်း (၇၀% နှင့် ၈၆%) တွင်ရှိခဲ့ဖူးသောကျန်ရှိသည့်နမူနာများထက် ပို၍ နည်းနိုင်ဖွယ်အလားအလာရှိကြသည်။
(1, ဎ = 102) = 3.34, p = .068, φ = 0.18 ။ ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအစီရင်ခံသောသူတို့၏အမျိုးအ, (28% vs. 9%) အဆုံးသတ်တော်မူပြီးမှဆက်ဆံရေးမြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့သည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ hypersexuality ပြဿနာများ (56% vs. 50%), χ2(3 ၏ရလဒ်အဖြစ်တင်းမာခဲ့ n သ = 82) = 5.91, p = .052, φ = 0.27 ။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရှောင်လွှဲနိုင်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအမျိုးအစားသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်း၊ ဤပုံစံငယ်သည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုရှောင်ရှားခြင်းမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အစီရင်ခံရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသည်အများအားဖြင့်ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ဤအမျိုးအစားသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းတွင်ထိရောက်သောရှောင်ရှားခြင်းမဟာဗျူဟာကိုတွေ့ရှိပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အလွဲသုံးစားမှုများကိုသတင်းပို့ရန်နည်းပါးသည်။ hypersexuality), ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုရောဂါနှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပွားမှု (Grant, Potenza, Weinstein, & Gorelick, 1 တွင်အနှစ်ချုပ်အဖြစ်) ကိုတွေ့ထားပြီးသည့်အတွက်။ အနာဂတ်သုတေသနအတွက်ဤ Subtype ရှိယောက်ျားများသည် gaming (ဆိုလိုသည်မှာဗီဒီယိုဂိမ်းများ) သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းပြasနာများကဲ့သို့သောရှောင်ရှားခြင်း၏ထူးခြားသောအပြုအမူများနှင့်ပြproblemsနာများရှိမရှိအကဲဖြတ်ရန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဟုခေါ်သည့်အများစုသည်အခက်ခဲဆုံးအချိန်သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲသည်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အချိန်ဆွဲနေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်ဖြစ်သည်။
ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းမြင့်မားခြင်းရှိနိုင်သူများ (ဥပမာ Beswick, Rothblum, & Mann, 1988; Flett, Stainton, Hewitt, Sherry, & Lay, 2012) နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူများသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံရန် ပို၍ သိသာသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောစိုးရိမ်စိတ်နှင့်အလားအလာရှိသောတသမတ်တည်းသည်ဤတစ် ဦး ချင်းစီသည်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွင်အစဉ်အလာရှိရန်အလားအလာနည်းပါးသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းသူတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးအပြန်အလှန်အတွက်ပါဝငျခံစားရအဆင်ပြေခံစားရရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများတွင်သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်အချိန်ကာလသည်ဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေရန်အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိနိုင်သည်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင်ရှိနေသောရှောင်ကြဉ်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူများသည်ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုတင်းမာစေသည်။ ၄ င်းတို့အနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏ပြသနာသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ထံမှဖုံးကွယ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည် (ဥပမာ၊ နာတာရှည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့် paraphilic hypersexuals ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်လူနာ၏အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မသိနိုင်) ။ လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာပြbeforeနာများမတိုင်မီကဖြစ်ပွားခဲ့သောသူတို့၏ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများကြောင့်သူတို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလေ့လာမှုတွင်ဖြစ်ပွားမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အမျိုးအစားခွဲများအားလုံးအတွက်ဤအရာကိုပြောနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးနှင့်ဆက်နွယ်မှုပြproblemsနာများနှင့်လည်းဆက်နွယ်နေနိုင်သည်မှာရှောင်လွှဲနိုင်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူများသည်အထူးသဖြင့်နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုကဲ့သို့သောအခြားမျိုးကွဲများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤပြproblemsနာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပြpredနာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုပြproblemsနာများနှင့်ဆက်နွှယ်နေခြင်းရှိ၊ မရှိ၊ ကြာရှည်။ မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ရလဒ်လား၊ လည်ပတ်မှု။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းလူသိများသောမီဒီယာဖောင်းပွမှုနောက်ခံတွင်အဓိကတင်ပြသောတိုင်ကြားချက်သည်နှောင့်နှေးသောသုတ်ရည်လွှတ်မှု၏အဆုံးသတ်ခြင်းကိုမဟုတ်ဘဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အဆုံးသတ်ဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်မှုကိုဖြန့်ဝေနေသောလက်တွေ့မှတ်တမ်းများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုထားသောမီဒီယာနှင့်မိမိကိုယ်ကိုကူညီသည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များရှိသည် (ဥပမာ၊ The Doctor Oz Show, January 31, 2013; James & O'Shea, မတ် ၃၀၊ ၂၀၁၄; yourbrainonporn.com) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံရန် (Ley, Prause, & Finn, 30) ။ ဤမီဒီယာရင်းမြစ်များ၏ပြောဆိုချက်များသည်ခိုင်လုံသောအကြောင်းအရင်းများရှိနိုင်သော်လည်းပြtheနာမှာသိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်သေးသောအဆိုပြုချက်များဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း / အပြာစာပေရုပ်ပုံများအကြားဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာရန်ပထမဖြစ်သည်။